SOMALILAND Archive | Faaqidaad | Page 2
Home»Archives»World News»SOMALILAND (Page 2)
Somaliland: Go’aamo laga gaaray khilaafka UCID oo la soo bandhigi doono
By Editor on 20. July 2016 SOMALILAND, World News
Gudiga diiwaan-gelinta ururada siyaasada Somaliland ayaa todobaadkan kaga dhawaaqi doona Hargeysa go’aamo ay ka gaareen khilaafka UCID, Sida uu goor dhoweyd Faaqidaad u sheegay xubin ka tirsan gudigaas. “Gudigu wuxu buriyey musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen” Sida uu xaqiijiyey masuulka la hadlay Faaqidaad oo ka gaabsaday in aanu soo xigano magaciisa. Labada garab ee xisbigaasi u […]
Faysal Cali Waraabe “Waa suurtagal in aan mar sadexaad tartamo”
By Editor on 15. July 2016 SOMALILAND, World News
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayaa soo hadal qaaday suurtagalnimada inuu mar sadexaad u ordo madaxtooyada Somaliland. Isagoo boqolaal dadweyne ah kula hadlayey Magaalada Ceerigaabo ayuu ka codsaday inay codka siiyaan oo aysan qadin maalinta codbixinta. “Doorkan waan idiin ka fadhiyaa codka Insha Allaah, Odayga mar sadexaad ha ridinina” Ayuu yiri Faysal oo sheegay […]
Somaliland iyo Khaatumo oo ku muransan meydka marxuum Garaad Abshir
By Editor on 9. July 2016 SOMALILAND, World News
Maamulka Somaliland ayaa daadifeeyey war ka soo baxay beesha Guuleed Garaad ee Barkad kaas oo sheegayey in lagu aasi doono maydka AHN Marxuum Garaad Abshir Saalax Maxamed magaalada Bali-cad. Wasiirka Warfaafinta Somaliland Saxardiid Cadaani oo shir jaraa’id ku qabtay Hargeysa wuxuu ku dhawaaqay in marxuumka lagu aasi doono Widhwidh, Isagoo shuruudo dul dhigay dadka ka […]
Sanaag: Ciidamadii Somaliland iyo Puntland oo ka baxay
By Editor on 1. July 2016 SOMALILAND
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo dhigiisa Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku amray ciidamadooda inay dib uga soo baxaan Gobolka Sanaag. Goobjooge ku sugan tuulada Kaladhac oo u jirta wax ka yar 5km wadada laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa noo xaqiijiyey inay saaka ka gudbeen halkaas raxantii ugu […]
Somaliland: Khilaaf ka taagan saami qaybsiga Golaha Wakiilada
By Editor on 29. June 2016 SOMALILAND, World News
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta kulan aan caadi ahayn isugu yeeray Xisbiyada iyo shir gudoonka Wakiilada. Shirkaas oo qaatay mudo ku siman labo saacadood waxaa lagaga hadlay hanaankii loo mari lahaa saami qaybsiga Golaha Wakiilada. Madaxweynaha ayaa ka codsaday Gudoomiyayaasha Xisbiyada iyo Gudoonka Golaha Wakiilada inay arrintaas soo go’aamiyaan. Wararka Warsidaha Faaqidaad ka […]
Somaliland: Wasiiro waan waan nabadeed u tegay Laascaanood
By Editor on 26. June 2016 SOMALILAND, World News
Wasiiradda Arrimaha Gudaha, Cadaalada iyo Warfaafinta Soomaliland ayaa maanta gaaray xarunta Gobolka Sool. Sidii ay gacan uga geysan lahaayeen daminta xiisad ka taagan duleedka Laascaanood oo u dhexeysa labo beelood ayuu ujeedka safarkoodu salka ku hayaa, Sida uu sheegay Wasiir Warancade. Hoos ka daawo safarka Wasiirada. Hadii aad jeceshahay inaad rukumato wararka iyo warbixinada Warsidahan, […]
Somaliland: “Itoobiya isma hayno” Gaashaamo Ugaadeen baa xasilooni u diidan
By Editor on 25. June 2016 SOMALILAND, World News
Wasiirada Arrimaha Gudaha, Gaashaandhiga, Cadaalada iyo Warfaafinta ayaa shalay gaaray xarunta Gobolka Togdheer, halkaas oo ay kulan kula qaateen qaar ka mid ah duubabka dhaqanka Somaliland. Guriga martida Burco ayey ugu sameeyeen odayaasha afur iyo casho waxaana la iska waraystay xaalada degmada Gaashaamo. Odayaasha waxaa weheliyey dad goob joog u ahaa maatadii ciidamada Itoobiya ku […]
Faysal Cali Waraabe: Xasan Sh. maaha inuu simo Somaliland iyo Majeerteen
By Editor on 18. June 2016 SOMALILAND, World News
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ayaa si kulul uga hadlay gudigii doorashada ee uu dhowaan soo magcaabay Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud. Faysal wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay inuu Madaxweynuhu simo Somaliland oo qaran ah iyo beesha Majeerteen oo degan Gobolka Bari, Siduu hadalka u dhigay. Gobolada Sool iyo Sanaag ayuu sheegay inaysan degin beesha […]
Prof: Samatar wuxuu ku biiray Kulmiye
By Editor on 13. June 2016 SOMALILAND, World News
Prof: Axmed Ismaaciil Samatar ayaa go’aansaday inuu ku biiro Kulmiye, Kadib markii ay miro dhaleen wada hadalo uu la’lahaa hogaanka Xisbigaas, Sida uu fahansanyahay Faaqidaad. Wefti uu hogaaminayo Gudoomiye Muuse Biixi Cabdi uuna xubin ka ahaa Prof. Samatar ayaa maanta gaaray Boorame. Munaasabad afur ah oo la isku xog waraystay ayey weftigu caawa la qaateen […]
Somaliland oo dacwad ka dhan ah Kilika 5-aad u gudbisay Itoobiya
By Editor on 12. June 2016 SOMALILAND, World News
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa u gudbiyey Dowlada Federaalka Itoobiya dacwad ka dhan ah Kilika 5-aad, Sida uu fahansanyahay Faaqidaad. Wuxuu maanta ku qaabilay Hargeysa Wasiiro ka tirsa Xukuumada Itoobiya, Kuwaas oo uu kala hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday Degmada Gaashaamo. “Waxay noo balan qaadeen inay baaritaan ku samayn doonaan dhacdadii Gaashaamo” Ayuu […]